Ma ogtahay Aamir, Salman, Ajay iyo SRK mid walbo filim Hit dhameestiran uu fagta kowaad dadka isku baray – Filimside.net
Ma ogtahay Aamir, Salman, Ajay iyo SRK mid walbo filim Hit dhameestiran uu fagta kowaad dadka isku baray
27-sano ee ugu dambeesay 5-Superstar ayaa soo taagan sidoo kalena calankooda dhici weesan yahay awoodoodana weli taagan tahay waana Salman Khan, Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Ajay Devgn iyo Akshay Kumar.
Hadaba marka Akshay meel la iska dhigo afarta kale fagta hore dar dar xoogan ayay fanka Hindiya kusoo galeen waayo Akshay sedexdiisii filim ee ugu horeeyay markii ay ka guul dareesteen sidoo kalena jah wareersan yahay ayuu xasilay markii uu Khiladi sameeyay 1992 kaasi oo Hit noqday.
Aamir Khan wuxuu fagta hore Hindiya ku qabsaday filimkiisii Qayamat Se Qayamat Tak (1988) Kaasi oo Super Hit uu diiwaan gashan laakiin u badan tahay in Blockbuster ka dhigi doonto shabakada BOI marka ay xogaha aflaanta wixii ka dambeeyay 1993 Update gareyso.
Aamir Khan filimkiisa kowaad waxaa la sameesay lana soo caan baxday Juhi Chawla ayadoo u QSQT uu noqday filim Classic ah oo aad loo jecel yahay ilaa iminka.
Salman Khan wuxuu fagta hore Hindiya ku qabsaday filimkii ku dhawaaday iskoorkii Sholay inu jebiyo waana Main Pyar Kiya (1989) kaasi oo All Time Blockbuster noqday waxaana la sameesay atirishadii Bhagyashree.
MPK wuxuu ka mid noqday filimada ugu weyn ebid Hindiya sameeyaan taariikh ahaan Salman Khanna ka dhigay xili horeba in jaceyl waali ah shacabka Hindiya ee fanka ku xiran u qaadaan.
Ajay Devgn wuxuu fagta hore Hindiya ku qabsaday filimkiisii Phool Aur Kaante (1991) kaasi oo Super Hit noqday weliba Ajay Action-kiisa iyo xarakaadkiisa wuxuu Boxoffice-ka ku garaacay sedex awood badan oo is biirsadeen Anil Kapoor, Sridevi iyo Director Yash Chopra madaama filimkoodii Lamhe uu guul dareestay isku maalin ayaa tiyaatarada lala saaray Ajay filimkiisii kowaad.
Wixii markaas ka dambeeyay Devgn gadaal masoo eegin ilaa maantana calankiisa wuu taagan yahay, waxaana Ajay filimkiisii kowaad la sameesay atirishada Madhoo oo lasoo caan baxday.
Shah Rukh Khan wuxuu fagta hore Hindiya ku qabsaday filimkii Deewane (1992) ee Super Hit noqday loona badinaayo inuu Blockbuster noqon doono waa hadii BOI xogtii 1992 Update gareyso.
SRK Deewane qaab jiliinkiisa ayuu dhalinta ku qabsaday kuna soo jiitay weliba Rishi Kapoor iyo Divya Bharti oo ka caansanaa ayuu filimkaan hadal heyntiisa kala wareegay kadibna wuxuu noqday Big Star ilaa maanta Bollywood-ka ka maarmin.
zxp wxn idin weydiyey hrithik menu blocbuster ku zoo caan bixin
haa sxb wa runtaa balse Maqaalka 27ki sano udambeysay ayu kahadla micnaha 2000 waxii ka horeyay halka Hritik 2000 soo caan baxay marka arinkiisa wa mid gooni ah oo Raggan kale isku jiil lama noqon karo.
Waxaa laga hadlayaa atoorayasha 27 sano fanka awooda ku lahaa.